umugqa wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo,ukucubungula pellets ezintantayo zezinhlobo zezinhlanzi
1.Le migqa yokuphakelwa kwezinhlanzi isetshenziswa kabanzi njengokuphakelwa emanzini noma okufuywayo njengegolide, izinhlanzi ezishisayo, inhlanzi eyikati, ama-shrimps, inja, ikati nokunye.
2.Intambo yokukhiqizwa kwe-pellet yezinhlanzi ezintantayo inqubo ephelele yokukhiqizwa kwe-pellet feed.
3.Lo mugqa wokuphakelwa kwezinhlanzi uklanyelwe ukwenza ama-pellets kwezohwebo kusuka kummbila, ummbila, utshani, okusanhlamvu, amaprotheni, molasses njalonjalo, nama-pellets okugcina anezimo ezahlukahlukene, ukunambitheka okuhlukile, izakhi ezicebile nokuthungwa okuhle.
Umugqa wethu wokukhiqizwa kwe-pellet yezinhlanzi ezintantayo inqubo ephelele yokukhiqiza ama-pellet. Lo mugqa wokuphakelwa kwezinhlanzi uklanyelwe ukwenza ama-pellets kwezohwebo kusuka kummbila, ummbila, utshani, okusanhlamvu, amaprotheni, molasses njalonjalo, nama-pellets okugcina anezimo ezahlukahlukene, ukunambitheka okuhlukile, izakhi ezicebile nokuthungwa okuhle, futhi le migqa yokuphakelwa kwezinhlanzi isetshenziswa kabanzi njengokuphakelwa emanzini noma okufuywayo njengegolide, izinhlanzi ezishisayo, inhlanzi eyikati, ama-shrimps, inja, ikati nokunye.. Ukulawulwa okuzenzakalelayo okukhulu, ukusebenza kahle kokukhiqiza, umugqa wethu wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo uyisinqumo esihle kakhulu samamayela aphakathi nendawo amakhulu wokuphaka namapulazi okuzala. Imigqa yokukhiqiza ephelele ye-pellet enamakhono ahlukene ayatholakala ukuhlangabezana nezidingo ezithile zamakhasimende.
Le ntambo yokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo isanda kuthuthukiswa ukuze ihlangabezane nesidingo sokukhiqizwa okujulile kwama-pellets ezinhlanzi zezilwane. Ngokucaciswa okuningi lo msele wokukhiqiza ungakhiqiza okuphakelayo kwezinhlanzi, ukucwilisa izinhlanzi zokudla, pet feed, ukudla kwemfuyo, njll. Imikhiqizo ingaba nobunjwa obuhlukile, ukunambitheka okuhlukile, izakhi ezicebile nokuthungwa okuhle ukuze kuhlangane nomkhuba ohlukile wokudla wezilwane. Ukulawulwa okuzenzakalelayo okuphezulu nokukhiqiza okuphezulu kokusebenza, umugqa wethu wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo uyisinqumo esihle kakhulu samamayela aphakathi nendawo amakhulu wokuphaka namapulazi okuzala. Umugqa wethu wokukhiqiza izinhlanzi ukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zama-pellets ezinhlobonhlobo zezinhlanzi ezibandakanya i-Halibut pellets, Catfish pellets, I-CatCarp pellet, Ama-trout pellets, Ama-pellets we-Hemp, Ama-pellets we-CSL,njll.
Inqubo Yokusebenza Yentambo Yokuphakelwa Kwezinhlanzi Ezintantayo
Procedure Inqubo yezobuchwepheshe:
Izinto Zokuqalisa → Ukuxuba → Ukudlulisa
I-Mixer → iyunithi yokudlulisa → i-extruder → ilifti → eyomile → isikhulisi esishisayo → isikhulisi → umshini wokufafaza ngamafutha → umshini wokufaka othomathikhi
Inzuzo Yokukhiqizwa Kokuphakelwa Kwezinhlanzi Inhlanzi
◇ Ipharamitha yezobuchwepheshe, njengezinto zokusetshenziswa, lokushisa, kanye nomswakama, walesi sitshalo sokukhiqiza izinhlanzi siyakwazi ukuzihlekela. Ukuphakelwa kwezinhlanzi ezintantayo ezikhiqizwa yilesi sitshalo kunokubukeka okuhle, ukunambitheka okungafani kanye nelayisi-umsoco, ilungele izinhlanzi ezahlukahlukene kanye nezilwane ezifuywayo.
Umugqa wokuphaka izinhlanzi usetshenziswa kabanzi ekwenziweni kokudla kwezilwane, njengezinja, amakati, inhlanzi, izimpungushe, izinyoni nezinye izilwane ezifuywayo.
◇ lo muthi wokuphakelwa kwezinhlanzi ezintantayo usebenzisa indlela yokuphinda ukhiphe isikulufu esikabili. Inqubo yokukhiqiza izinhlanzi e-pellet, kusuka ezintweni ezingavuthiwe ezichotshozwa emaphaketheni wemikhiqizo eseqediwe, kuqedwe ngasikhathi sinye.
◇ Yonke imishini yokudlela izinhlanzi kulesi sitshalo isebenza ngokuzinza kanye nobuchwepheshe obuphambili. Kunganelisa izidingo zokukhiqiza zamakhasimende ahlukahlukene emakethe yamanje.